Madax ka tirsan Xisbiga Kulmiye ee Somaliland oo magaalada Laascaanood soo gaaray – Radio Daljir
Madax ka tirsan Xisbiga Kulmiye ee Somaliland oo magaalada Laascaanood soo gaaray
Abriil 11, 2015 1:53 b 0
Sabti, Abriil 11, 2015 (Daljir) —Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ee xiligan haya talada Somaliland, Muuse Biixi iyo Wafdi uu Hoggaaminayo ayaa soo gaaray maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
“Siyaasiyiinta iyo Garaadadu waxay nagu xantaan inaan Somalia kala goynayno… innagu ma kala goynayno haddaanu nahay Somaliland waanu jecel nahay in Somalia ay hagaato, waxaanse jecel nahay inaan wax isla fahano,” ayuu yiri Muuse Biixi oo warbaahinta kula hadlay Laascaanood.
Muuse Biixi oo la hadlayay Tageerayaasha xisbiga Kulmiye ayaa wuxuu uga sheekeeyay waqtigii dagaalka, isagoo yiri. “Garaad Cali buu ahaa ninkii yiri yaynaan deg-degin ee aan maamulkeenna dhisanno, kuwa diidanaana inaga ayaan ahayn; maantana waxaan leeyahay ku celinayaa Garaadku uu horay u yiri.”
Madaxweyne Gaas iyo RW Cumar oo Shirar ku leh Madaxtooyada